Jung Hae In ရဲ့ Fan Girl လေးမှန်ရင် မသိမဖြစ်သိထားရမယ့် သူ့အကြောင်းလေးတွေ…💕 – Trend.com.mm
Posted on August 27, 2018 by Noel
“While You Were Sleeping” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ရဲသားချောချောလေးကို ယူတို့မမေ့သေးဘူးထင်ပါတယ်နော်။အသက် ၃၀လို့မထင်ရလောက်အောင်ကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့မင်းသား Jung Hae In ဟာ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတ်ကားမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အခုဆိုရင်အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ Heartthrob လေးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါဖြင့် ယူတို့ရဲ့ အသည်းနှလုံးJung Hae In နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီအကြောင်းတွေကိုရောသိရဲ့လား? သူ့ရဲ့ ပရိသတ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေမသိမဖြစ်သိထားသင့်ပါတယ်နော်
*Jung Hae In ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီးသားပါ
ကဲ ပရိသတ်တွေနဲ့ခဏတာခွဲရတာတွေ၊စစ်မှုထမ်းဆောင်ရာကနေပြန်လာရင်ပရိသတ်တွေမေ့သွားမှာစိုးလို့စိတ်ပူရတာတွေ စတဲ့ ပူပန်မှုတွေမရှိပဲယူတို့ရဲ့မင်းသားနောက်ထပ်ဆက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို စိတ်အေးလက်အေးစောင့်မျှော်နိုင်ပါပြီ။ကိုယ်တွေကြိုက်တဲ့ အိုင်ဒေါလ်တွေစစ်မှုထမ်း
သွားပြီဆို ပြန်လာဖို့စောင့်ရတဲ့အလုပ်က It’s over ဖြစ်သွားပြီပေါ့ 😁
Jung Hae In ဟာ ဂျိုဆွန်းခေတ်တုန်းက လွှမ်းမိုးကျော်ကြားမှုရှိခဲ့သူ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Jeong Yakyong ရဲ့ မြစ်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။Jeong Yakyong ဟာ အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေ၊သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေ၊အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာယူဆချက်တွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။
*“Pretty Noona Who Buys Me Food”ဟာ သူပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်က AOA black အဖွဲ့ရဲ့သီချင်းဗီဒီယိုမှာပါဝင်ခဲ့တာက သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအနုပညာခြေလှမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက် အရံအဖြစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဟာ သူ့ရဲ့ ပထဆုံးခေါင်းဆောင်ဇာတ်ကားပါပဲ။တစ်ကားတည်းနဲ့တင်နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို အကုန်ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရသူပါပဲ။
အဲ့လဲ့ သရုပ်ဆောင်လောကမှာတင်မဟုတ် ဂီတဘက်မှာသာ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပါ။တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဆည်းပူးခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။
*နာမည်ပြောင်က “Milk Man” ပါတဲ့
ကိုရီးယားပရိသတ်တွေကသူ့ကို နာမည်ပြောင် “Milk Man” ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်က သာမန်လူထက်ပိုတဲ့အရည်အချင်းအစွမ်းအစတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ဆိုလိုတာပါ။မင်းသားကလည်း အဲ့ဒီနာမည်ပြောင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပဲ
Jung Hae In က အင်တာဗျူးတော်တော်များများမှာ စကိတ်စီးရတာကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့အကြောင်းဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ပရိသတ်တွေက သူ့ရဲ့ မျက်နှာဟာရိုမန်တစ်ဆန်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က အရမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်တဲ့။How Sweet !
*“Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့အတွက်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုတော့…
“Pretty Noona Who Buys Me Food” အကြိုမိတ်ဆက်ပွဲမှာ Jung Hae In က သူ့ရဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော Son Ye Jin ရဲ့မျက်လုံးကိုတည့်တည့်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမက အရမ်းလှလို့ပါတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့် Son Ye Jin ရဲ့ မျက်လုံးကိုတည့်တည့်ကြည့်တဲ့အခါသူ့မျက်နှာက ပြုံးနေတာပါ။မပြုံးပဲ သူမရဲ့မျက်လုံးကိုမကြည့်နိုင်ပါဘူးတဲ့ 😅💕
၀ါသနာတူလေးတွေရှိလား?Jung Hae In က ရာသီဥတုကောင်းတဲ့အခါတိုင်း သူ့စက်ဘီးလေးနဲ့အပြင်ထွက်လျှောက်လည်တတ်ပါတယ်တဲ့။
အက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ချို့မှာ သူ့ရဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုအရည်အချင်းတွေက အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
Jung Hae In က သူ့ရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဘယ်လိုစုဆောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူအများဆုံးပိုက်ဆံသုံးတာက ဘီယာသောက်တဲ့အခါမှာပဲလို့ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ် 🤭
*သူက introvert တစ်ယောက်ပါတဲ့
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Jung Hae In က “သူ့ရဲ့အားနည်းချက်က တစ်ယောက်တည်းတသီးတသန့်နေတတ်ပြီး လူအများနဲ့ဆက်ဆံဖို့ တုံ့နှေးတတ်၊ရှက်တတ်လွန်းတာပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အခုလိုပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေရနေတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရိုးသားပြီး အားလုံးကိုစိတ်ရင်းအတိုင်းဆက်ဆံတတ်တဲ့စိတ်လေးကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”ဆိုပြီးဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ Totally accept ပါနော် 😍
ဒါက သူများတွေအတွက်တော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ သေးသေးလေးကအစ အရေးကြီးပြီးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တစ်ခုပါပဲ
*Bromance ကတော့ “While You Were Sleeping” ကတွဲဖက်မင်းသားတွေပါပဲ
ဒါက မဆန်းတော့ပါဘူး။ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ရင် အားလုံးကညီအစ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။Jung Hae In ကတော့ “While You Were Sleeping” ဇာတ်ကားထဲက မင်းသား Lee Jong Suk နဲ့ Shin Jae Ha တို့နဲ့ ညီအစ်ကိုလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်က
မကြာခဏဆိုသလို ခရီးလည်းအတူတူထွက်ကြပါသတဲ့။တကယ်လို့ လူသူကင်းမဲ့တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ကို လူတစ်ယောက်နဲ့အတူသွားရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့သွားချင်လဲမေးတဲ့အခါမှာတော့ Lee Jong Suk နဲ့အတူသွားချင်ပါတယ်လို့ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ် 💕
ကဲ Fan လေးတွေ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ❤
“While You Were Sleeping” ဇာတျလမျးတှဲထဲက ရဲသားခြောခြောလေးကို ယူတို့မမသေ့ေးဘူးထငျပါတယျနျော။အသကျ ၃ဝလို့မထငျရလောကျအောငျကလေးမကျြနှာလေးနဲ့ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့မငျးသား Jung Hae In ဟာ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတျကားမှာ ခေါငျးဆောငျမငျးသားအဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီးနောကျ အခုဆိုရငျအောငျမွငျကြျောကွားလူကွိုကျမြားတဲ့ Heartthrob လေးဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ဒါဖွငျ့ ယူတို့ရဲ့ အသညျးနှလုံးJung Hae In နဲ့ပတျသကျလို့ ဒီအကွောငျးတှကေိုရောသိရဲ့လား? သူ့ရဲ့ ပရိသတျဆိုရငျ ဒါလေးတှမေသိမဖွဈသိထားသငျ့ပါတယျနျော
*Jung Hae In ကစဈမှုထမျးဆောငျပွီးသားပါ
ကဲ ပရိသတျတှနေဲ့ခဏတာခှဲရတာတှေ၊စဈမှုထမျးဆောငျရာကနပွေနျလာရငျပရိသတျတှမေသှေ့ားမှာစိုးလို့စိတျပူရတာတှေ စတဲ့ ပူပနျမှုတှမေရှိပဲယူတို့ရဲ့မငျးသားနောကျထပျဆကျရိုကျမယျ့ဇာတျလမျးတှဲတှကေို စိတျအေးလကျအေးစောငျ့မြှျောနိုငျပါပွီ။ကိုယျတှကွေိုကျတဲ့ အိုငျဒေါလျတှစေဈမှုထမျး
သှားပွီဆို ပွနျလာဖို့စောငျ့ရတဲ့အလုပျက It’s over ဖွဈသှားပွီပေါ့ 😁
Jung Hae In ဟာ ဂြိုဆှနျးခတျေတုနျးက လှမျးမိုးကြျောကွားမှုရှိခဲ့သူ အတှေးအချေါပညာရှငျ Jeong Yakyong ရဲ့ မွဈလညျးဖွဈပါသေးတယျ။Jeong Yakyong ဟာ အဲ့ဒီခတျေတုနျးက စိတျပိုငျးဆိုငျရာစာအုပျတှေ၊သိပ်ပံပညာရပျနဲ့ဆိုငျတဲ့စာအုပျတှေ၊အစိုးရပိုငျးဆိုငျရာယူဆခကျြတှစေတဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုရေးသားခဲ့ဖူးပါတယျ။
*“Pretty Noona Who Buys Me Food”ဟာ သူပထမဆုံးခေါငျးဆောငျပါဝငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ငါးနှဈက AOA black အဖှဲ့ရဲ့သီခငျြးဗီဒီယိုမှာပါဝငျခဲ့တာက သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအနုပညာခွလှေမျးပါ။အဲ့ဒီနောကျ အရံအဖွဈဇာတျလမျးတှဲတှမှောပါဝငျခဲ့ပွီး ဒီနှဈ ၂၀၁၈ မှာထှကျရှိခဲ့တဲ့ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဟာ သူ့ရဲ့ ပထဆုံးခေါငျးဆောငျဇာတျကားပါပဲ။တဈကားတညျးနဲ့တငျနိုငျငံတကာပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို အကုနျပိုငျဆိုငျလိုကျရသူပါပဲ။
အဲ့လဲ့ သရုပျဆောငျလောကမှာတငျမဟုတျ ဂီတဘကျမှာသာ သူ့ကိုယျသူ ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့မငျးသားတဈလကျပါ။တက်ကသိုလျမှာတုနျးက ဂီတနဲ့ပတျသကျပွီးလလေ့ာဆညျးပူးခဲ့ဖူးတယျလို့သိရပါတယျ။
*နာမညျပွောငျက “Milk Man” ပါတဲ့
ကိုရီးယားပရိသတျတှကေသူ့ကို နာမညျပွောငျ “Milk Man” ဆိုပွီးပေးထားပါတယျ။အဓိပ်ပာယျက သာမနျလူထကျပိုတဲ့အရညျအခငျြးအစှမျးအစတှပေိုငျဆိုငျထားသူလို့ဆိုလိုတာပါ။မငျးသားကလညျး အဲ့ဒီနာမညျပွောငျကိုကွိုကျတယျဆိုပဲ
Jung Hae In က အငျတာဗြူးတျောတျောမြားမြားမှာ စကိတျစီးရတာကိုအရမျးကွိုကျတဲ့အကွောငျးဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။ပရိသတျတှကေ သူ့ရဲ့ မကျြနှာဟာရိုမနျတဈဆနျပွီး ခန်ဓာကိုယျက အရမျးမိုကျတယျလို့ပွောကွပါတယျတဲ့။How Sweet !
*“Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတျကားနဲ့ပတျသကျလို့ သူ့အတှကျအခကျခဲဆုံးအပိုငျးကိုရှာတှခေဲ့ပါတယျတဲ့။ဘာလဲဆိုတော့…
“Pretty Noona Who Buys Me Food” အကွိုမိတျဆကျပှဲမှာ Jung Hae In က သူ့ရဲ့တှဲဖကျသရုပျဆောငျမငျးသမီးခြော Son Ye Jin ရဲ့မကျြလုံးကိုတညျ့တညျ့ကွညျ့ဖို့ခကျခဲပါတယျလို့ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမက အရမျးလှလို့ပါတဲ့။အဲ့ဒါကွောငျ့ Son Ye Jin ရဲ့ မကျြလုံးကိုတညျ့တညျ့ကွညျ့တဲ့အခါသူ့မကျြနှာက ပွုံးနတောပါ။မပွုံးပဲ သူမရဲ့မကျြလုံးကိုမကွညျ့နိုငျပါဘူးတဲ့ 😅💕
၀ါသနာတူလေးတှရှေိလား?Jung Hae In က ရာသီဥတုကောငျးတဲ့အခါတိုငျး သူ့စကျဘီးလေးနဲ့အပွငျထှကျလြှောကျလညျတတျပါတယျတဲ့။
အကျရှငျဇာတျကားတဈခြို့မှာ သူ့ရဲ့ တိုကျကှမျဒိုအရညျအခငျြးတှကေ အမြားကွီးအထောကျအကူဖွဈခဲ့တယျလို့အငျတာဗြူးမှာပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
Jung Hae In က သူ့ရဲ့ ဝငျငှတှေကေို ဘယျလိုစုဆောငျးရမယျဆိုတာကောငျးကောငျးသိထားတဲ့သူတဈယောကျပါ။အငျတာဗြူးတဈခုမှာ သူအမြားဆုံးပိုကျဆံသုံးတာက ဘီယာသောကျတဲ့အခါမှာပဲလို့ ပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ 🤭
*သူက introvert တဈယောကျပါတဲ့
အငျတာဗြူးတဈခုမှာ Jung Hae In က “သူ့ရဲ့အားနညျးခကျြက တဈယောကျတညျးတသီးတသနျ့နတေတျပွီး လူအမြားနဲ့ဆကျဆံဖို့ တုံ့နှေးတတျ၊ရှကျတတျလှနျးတာပဲဖွဈတယျလို့ထငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောအခုလိုပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှရေနတောက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ရိုးသားပွီး အားလုံးကိုစိတျရငျးအတိုငျးဆကျဆံတတျတဲ့စိတျလေးကွောငျ့ဖွဈပါလိမျ့မယျ”ဆိုပွီးဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။ Totally accept ပါနျော 😍
ဒါက သူမြားတှအေတှကျတော့အရေးကွီးတာမဟုတျပမေဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျကတော့ သေးသေးလေးကအစ အရေးကွီးပွီးတနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့အခကျြအလကျတဈခုပါပဲ
*Bromance ကတော့ “While You Were Sleeping” ကတှဲဖကျမငျးသားတှပေါပဲ
ဒါက မဆနျးတော့ပါဘူး။ရုပျရှငျတဈကားရိုကျရငျ အားလုံးကညီအဈကိုသူငယျခငျြးတှဖွေဈသှားကွတာပါပဲ။Jung Hae In ကတော့ “While You Were Sleeping” ဇာတျကားထဲက မငျးသား Lee Jong Suk နဲ့ Shin Jae Ha တို့နဲ့ ညီအဈကိုလိုဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။သူတို့သုံးယောကျက
မကွာခဏဆိုသလို ခရီးလညျးအတူတူထှကျကွပါသတဲ့။တကယျလို့ လူသူကငျးမဲ့တဲ့ကြှနျးတဈကြှနျးပျေါကို လူတဈယောကျနဲ့အတူသှားရမယျဆိုရငျ ဘယျသူနဲ့သှားခငျြလဲမေးတဲ့အခါမှာတော့ Lee Jong Suk နဲ့အတူသှားခငျြပါတယျလို့ဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ 💕�
ကဲ Fan လေးတှေ ကနြေပျကွလိမျ့မယျထငျပါတယျ ❤
လက်ရှိယူတို့အသက်ဟာ ၂၀ ကနေ ၂၅ ၀န်းကျင်ဆိုရင် အချိန်မလွန်ခင်ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်ပါစေ…